Warshadda Uumiga Uruurisa | Soo-saareyaasha Boorka Shiinaha, Soo-saareyaasha
Shirka geedi socodka ilaalinta deegaanka
Nidaamyada ka hortagga bay'ada ee soo ururiya Soodhawrka walxaha aadka u fiican (soot) ee ay soo saarto heerkulka sare lama daweeyo oo si toos ah ayaa looga saaraa iyada oo aan la abaabulin, taas oo si ba'an u wasakhaysa jawiga cimilada. Danbasku wuxuu ka kooban yahay tiro badan oo ah walxo culus oo bir ah, neefsashada xad dhaafka ahna waxay si daran u saameysaa caafimaadka dadka.Waxaa sidoo kale jira halista qaraxyo ka dhasha boodhka aadka u wanaagsan. Marka loo eego xaaladaha shaqada ee foornada lime ee soosaarta boodhka, duufaanta ka saarta boodhka w ...
Aruuriyaha Boorka Duufaanta
Boorka - oo ay ku jirto gaaska qiiqa ayaa marka hore galaya aruuriyaha boodhka duufaanka, walxaha waaweyn ee boodhku waxay ku dhacaan dhinaca hoose ee koorta iyada oo loo marayo wareegga wareega, si markaa qaybaha waaweyn ee boodhka looga saari karo.
Nooca Bac-aruurinta ee Soodhawrka aruuriya
Ka dib markii uu ka soo baxay nuugista qoyaanka gaaska, gaaska boodhka ku jira wuxuu galaa boorsada aruuriyaha bacda. Iyadoo loo marayo shaandhaynta lakabka shabaqa bacda, boodhka yar-yar ee hadhaaga ah ayaa ku hadhaya boorsada si loo gaadho saamaynta ka saarista boodhka yar-yar.
Biyaha filim sameeyaha
Boodhka iyo gaaska qiiqa sulphide ka soo qulqulaya miiraha bacda ayaa galaya munaaradda wareega.
Ku marooji-nooca hawada kombaresarada
Iyada oo leh waxqabadkeeda sare, waxtarka sare, dayactirka bilaashka ah iyo faa'iidooyinka kale, Nooca Isku-buufinta hawada ayaa si joogto ah u siiya hawo cufan oo tayo sare leh dhammaan qaybaha nolosha.
Ku rakibaadda taageere qabyo ah
Taageeraha qaboojiyaha ah ee la soo kiciyay ayaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro gaaska qiiqa hawada sare ee foornada, taas oo si weyn loogu isticmaalo hawo qaadashada iyo hawada kuleylka iyo foornooyinka warshadaha.